နည်းပညာ မှတ်တမ်း: July 2008
/ 23:32 / Comments: (0)
ကျော်ရန် ခွရန် အမှန်အကန် ပေါ့။ အသုံးတဲ့ မှာပါ။ သိပ်ကြီး ရှည်ရှည် ဝေးဝေး ပြောပြနေရင်လည်း အပြစ် ဖြစ်နေပါဦးမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် သုံးကြည့် အကျိုးရှိရင် သိမ်းထားလိုက်ပေါ့။
Google ပေးထားတာပါ။ Template အလှအပ တွေတော့ ခံစားလို့ မရတော့ပေမယ့် အရမ်းမြန်တယ်။ Bookmarks ထဲ သိမ်းထားသင့်တဲ့ လိပ်စာလေးပါဘဲ။
အပေါ်က box ထဲမှာ block site တစ်ခုလောက် ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ကြည့်ပါ။ ဒီမှာတော့ မှောင်နေလိမ့်မယ်။ လိပ်စာက...
" http://www.google.com/gwt/n " နှစ်သက်ရင် ယူသွားလှည့်ပါ။ IP block ဆိုရင်တော့ မရပါဘူး။
Labels: Cool website, Google, Proxy
/ 03:19 / Comments: (1)
ဒီရက်ထဲ apple နဲ့ အကြောင်းပါ ရေစက်ရှိနေလားမသိဘူး။ Safari နဲ့ magazine တွေဖတ်လို့ရတဲ့ နည်းသွားတွေ့တယ်။ U.S News & World Report, Playboy, Penthouse, Saveur, Popular Photography, Mens Health, Kiplinger`s, Car and Driver, PC Magazine, Elle, Technology Review, Outside, Macworld, Esquire, NME, Macworld Espanyol, Lonely Planet, Reader`s Digest, Viv, Kinlinger`s, Popular Mechanic တွေ ဖရီး ဖတ်နိုင်တယ်။ Playboy တို့ Penthouse တို့လို adult magazine ဖတ်ဖို့ 18+ ပြသနာတော့ အနော်အပါဘူး :)
မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ဖို့ Safari3ကို apple မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရပါမယ်။ Firefox မှာစမ်းတာ မရဘူး။ Safari က mac သမားတွေတော့ ရှိကြပြီးသားပါ။ IE,Opera တို့ထက်မြန်တယ်။
Safari install ပြီးရင် Edit\_preferences\_advanced ကိုသွားပြီး Show Develop menu in menu bar ကို အမှန်ခြစ်လေး ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆို Titile bar မှာ Develop ရောက်နေပါမယ်။
Develop\_user agent\_mobile safari 1..1.3-Iphone ကိုရွေးပေးပါ။
Address bar မှာ zino.com/iphone ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် မဂ္ဂဇင်း 20 ပေါ်လာပါမယ်။
နှစ်သက်ရာ ကလစ်နှိပ်ပြီး သဘောရှိ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ တစ်ခုရှိတာက select လုပ်ပြီးရင် ပုံသေးလေးဘဲ ပေါ်ပါတယ်။ arrow key လေးနဲ့ pages တွေလှန်လှောပြီး လိုချင်တဲ့ စာမျက်နှာရောက်မှ ကလစ်ထက်ခေါက်ရင် ပုံကြီးပေါ်လာပါမယ်။ စဆုံးကြည့်မယ် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မယ် ပရင့်ထုတ်မယ် ဆိုရင်တော့ မျက်နှာဖုံး ပုံသေးကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး contents ရှေ့က arrow key လေးနဲ့ သွားရုံပေါ့။ resolution လည်းကောင်းတယ်။ ကွန်နက်ရှင် မကောင်းရင်တော့ reload လေးနဲ့ ပြန်ခေါ်ပေးပေါ့။
ကဲ ကမ္ဘာကြီး ဘာတွေ ပြောင်းလည်း တိုးတက် လာသလဲ မြန်ဆန် လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ကြပါပြီ။.
/ 08:22 / Comments: (2)
Iphone 2.0 upgrade ရသွားပါပြီ။ ဘာ error မှမပြဘဲ unlock လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Iphone/Ipod touch version မြှင့်ချင်သူတွေ အတွက် လက်တို့လိုက်တာပါ။ 3g တွေတောင် ရပါပြီ။
Downgrade တုန်းက itunes 7.5 ကို ပြန်ဖြုတ် restart ချ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာပေါ့။
လိုအပ်တာက ms .net 2.0 ရယ် iphone firmware 2.0 ရယ် winpwn 2.0.0.3 ရယ် itunes 7.7 ရယ် bootloader 3.9,4.6 ရယ်ပါ။
firmware 2.0 က 2g နဲ့ 3g ခွဲပါတယ်။ mac အတွက် pwnage 2.0 ကိုသုံးပါတယ်။
အားလုံး install လုပ်ပြီးတော့ desktop မှာ pwnage folder ဆောက်ပြီး bootloader file နှစ်ခုနဲ့ firmware 2.0 file ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။
winpwn ကို run ပါတယ်။
browse .ipsw ကိုနှိပ်ပြီး pwnage folder ထဲက iphone 2.0 file ကိုရွေးပေးပါတယ်။
ပြီးရင် IPSW BUILDER ကိုနှိပ်ရတာပေါ့
IPSW BUILDER Windows မှာ application ကိုဝင် install cydia နဲ့ you tube activation fix ကို အမှန်ခြစ်ရွေးပေါ့။
IPSW BUILDER Windows မှာဘဲ custom images ကိုသွား use custom pictuare ကိုရွေးရပါတယ်။
search online နှိပ်လိုက်ရင် bootlogo 60 မှာနှစ်သက်ရာ ရွေးတာပေါ့။ offline ဆိုရင် တော့ မရွေးဘဲထားခဲ့နိုင်တာဘဲ။
IPSW BUILDER Windows မှာဘဲ custom payload ကို ထားခဲ့ပြီး advanced tab ကိုသွားပါတယ်။
activate phone,enable baseband update,neuter bootloader 3.9/4.6 နဲ့ unlock baseband ကို အမှန်ခြစ် ရွေးပေးပါတယ်။
အဲဒီအောက်မှာဘဲ bootloader တွေ မရွေးသေးရကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ Bootloader 3.9 file ခလုပ်ကိုနှိပ် pwnage folder ထဲက BL 39 ရွေးလိုက်တယ်။ BL 4.6 လည်း ဒီအတိုင်းပေါ့။
ဒါဆို အောက်ဆုံးက Build .ipsw ကို နှိပ်လို့ရပြီ။ ဘယ်မှာ save လုပ်မလဲဆို ရှာရလွယ်အောင် pwnage folder မှာဘဲ သွားသိမ်းလိုက်တယ်။
၁၀ မိနစ်လောက် စောင့်ပြီးရင် IPSW file created ဖြစ်သွားတယ်။
desktop ပေါ်က pwnage folder ထဲမှာ custom iphone 2.0 file အသစ်တိုးနေပါတယ်။
ဆက်ပြီး IPWNER ခလုပ်ကို ထပ်နှိပ်ရပါတယ်။ မနှိပ်မိရင် error 1600 to 1602 တက်လာတယ် ဆိုပါတယ်။ ပြန်လုပ်နေရမှာပေါ့။
ခဏနေတော့ you itunes has been pwned! လို့ ကြေငြာလာတယ်။
ဒါဆို winpwn လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ဆက်လုပ်ရတာက iphone ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်သွယ် ပြီးရင် ပါဝါ ပိတ်ပေါ့။ ဖုန်းထဲမှာ သုံးမယ့် ဖုန်းကဒ် ထည့်ထားရပါမယ်။
DFU mode ကိုဝင်ဘို့ power နဲ့ home bottom ကို တစ်ပြိုင်တည်း ၁၀ စက္ကန့် ဖိထားမယ်။
ပြီးရင် power ကိုဘဲ လွှတ်ပြီး home ဆက်ဖိထားမယ်။ ကွန်ပြူတာမှာ ဘိဖ်သံပေးပြီး itunes windows တက်လာမှပြန်လွှတ်တယ်။
recovery message လေးတက်လာရင် ok နဲ့ ပိတ်-ပြီးရင် shift ကို ဖိထားပြီး restore ကို click ခေါက်တော့ restore file ရွေးဘို့ windows လေးတက်လာတယ်။
pwnage folder ထဲက custom iphone 2.0 file ကို ပြန်ရွေးပေးရင် itunes က restore လုပ်သွားပါတယ်။
restore လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတော့ iphone 2.0 ဟာ unlocked and jailbroken ဖြစ်နေတာတွေ့တော့ တော်တော် ပီတိဖြစ်သွားတယ်။ ပင်ပန်းရတာ တန်သွားတယ်။
GSM card ပြောင်းထည့်တော့ ok ဘဲ any sim ဖြစ်နေတယ်။ download နဲ့ internet browse ပိုင်းကိုတော့ cafe မှာ သွားစမ်းမှ ထူးခြားတာ သိရမယ်။
ကျေးဇူးတင်လို့ developer ကို donate လုပ်မလို့ account မရှိတာနဲ့ ရှဲရှဲနီ လုပ်ပြီး free kick လိုက်တယ် ဟီး..ဟီး...
/ 05:35 / Comments: (0)
Iphone 2.0 ပြသနာတော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ firmware 1.1.4 ကို downgrade လုပ်လိုက်တယ်။ Jailbreak iPhone 2.0 with PwnageTool 2.0.0.3 ထွက်နေတာ အသိနောက်ကျလို့ မစမ်းလိုက်ရဘူး။ နောင် အချိန်ရရင်စမ်းကြည့်ဦးမယ်။ ခုတော့ downgrade iphone 2.0 to 1.1.4 မှတ်တမ်းလေးပေါ့။ iphone hacker တွေ dev တွေ ကောင်းမှုနဲ့ ချောချော မွေ့မွေ့ ပါဘဲ။ မသိသေး မတတ်သေးရင်သာ ခက်နေသလိုပါ။
ကျွန်တော်က iphone firmware 2.0 download လုပ်မိတာ ဆိုတော့ downgrade အတွက်လိုအပ်တာကို ရှာကြည့်တယ်။
iphone 1.1.4 162.0mb
ms .net framework 2.0 19.7mb
ziphone 3.0(windows) 18.7mb
itunes 7.5 51.8mb တို့ကို အရင် install လုပ်ပါတယ်။
မူလက itunes 7.7 ကို uninstall လုပ်ပြီး restart ချလိုက်ပါတယ်။ itune 7.5 နဲ့ ms .net ကို install လုပ်ပြီး ziphone ကို zip ဖြေလိုက်တယ်။
My Music folder ကိုသွားပြီး itunes music folder ထဲမှာ library file နှစ်ခုကို delete လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ .itl file ပါ။
itunes ကိုဖွင့်ရင် delete လုပ်လိုက်တဲ့ဖိုင် create လုပ်မလားမေးလာတယ် ok ပေါ့။
phone ကို USB ကြိုးတပ်ပြီး power ပိတ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် power နဲ့ home key ကို တစ်ပြိုင်နက် နှိပ်ထားပြီး ၁၀ စက္ကန့် စောင့်ပါတယ်။ ပြည့်ရင် power ခလုပ်ကိုဘဲ လွှတ်ပြီး home ကို ဆက်ဖိထားပါတယ်။
ခဏနေ ကွန်ပြူတာမှာ ဘိဖ် သံပေးပြီး itunes နဲ့ ချိတ်ဆက်သွားပါတယ်။ ဒါဆို home ကိုလွှက်လို့ရပြီ။
itunes မှာ shift ဖိထားပြီး restore ကို click ထောက်လိုက်ရင် pop up windows လေးပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာ download လုပ်ထားတဲ့ iphone 1.1.4 file ဆီသွားပြီး ရွေးပေးလိုက်တယ်။
သူ့ ဘာသာ restore လုပ်သွားတယ်။
ပြီးရင် phone ကို lock ဖြေဖို့ ziphone ကိုသုံးပါတယ်။ zip ဖြေထားတဲ့ ziphone folder မှာ သော့ပုံ လေးကိုနှိပ်ပြီး run လိုက်တယ်။
Do it all ကိုနှိပ်လိုက်တော့ ziphone က lock ဖြေပြီး activate လုပ်နေပါတယ်။ message box မှာ Done ဆိုရင် iphone downgrade and activate လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီ။
ဒီလိုနဲ့ iphone ဇာတ်လမ်း ပြီးဆုံးသွားတယ်။ 2.0 unlock ဖြေတာ အဆင်ပြေရင် တော့ ရှယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဘို့ iphonehacker,modmyifhone and youtube တို့မှာလေ့လာပါတယ်။
လာလည် ကြသူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီရက်တစ်ချို့တော့ ပိုစ့်အသစ် မတင်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ Iphone 2.0 upgrade လုပ်လိုက်တာ activate ပြန်လုပ်ခိုင်းလို့ တန်းလန်းကြီး ရပ်နေတယ်။ DVD John ကလည်း version နိမ့်မှာသာ hack နိုင်သေးတော့ မရဲတရဲနဲ့ သူ့နည်းဟောင်းကိုဘဲ စမ်းရတော့မယ်။ ခု download တွေလုပ်နေရင်း ဒီအကြောင်းလေး စာစီ မိတာပါ။
ကူညီနိုင်သူရှိရင်လည်း ကူညီကြပါဦး။ အကြံဥာဏ် လမ်းညွှန်မှု လေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
Itune 7.7 နဲ့ Iphone 1.1.4 ကို online update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မူလ AT&T simcard နဲ့ activate ပြန်လုပ်ခိုင်းလာတယ်။ ပြသနာက credit card ဖြည့်စရာမရှိတော့ activate မရဖြစ်သွားတယ်။
ကွန်ပြူတာမှာလို format ချလို့ရမယ့်နည်းများ တွေ့မလားရှာရတာ အမောဘဲ။ Downgrade လုပ်နိုင်ဘို့လည်း ပြူးပြဲရှာနေတာဘဲ။ emergancy mode မှာဘဲရပ်နေတော့ ခက်သားလား။
ခု ms .net framework 2.0 နဲ့ itune 7.3.0.54 ကိုတင်ပြီး DVD John နည်းစမ်းကြည့်ဦးမယ်။
1.1.4 လည်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ဝေးတယ်။
new version က hack ရခက်အောင် လုပ်ထားမှာပေါ့။ ကိုယ့် ဖုန်း မဟုတ်တော့ သိပ်ကြာအောင် နေလို့ကမရတော့ ခေါင်းထဲ သန်းစွဲသလိုလို ဗောက်ထသလိုလို ဖြစ်နေတယ်။
Mac မှာ သုံးနိုင်တဲ့ နည်းတွေရှိရင်တော့ mac သမားရှာရဦးမယ်။ ဆရာ့ ဆရာ ကိုဟက်ကာတွေ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရမှာမို့ ဒီရက်တော့ စာတွေ မရေးဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်။
ဒီကိစ္စလေး မြန်မြန်ရှင်းလိုက်ဦးမယ်။ သိထားတာလေးတွေလည်း ပြောပေးကြပါဦး။
/ 19:01 / Comments: (0)
IE user တွေ သုံးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မပါဘဲ ၀က်ဆိုဒ်တွေကို ပိတ်ပစ်တာပါ။ family safety အဖြစ်ဘဲကောင်းပါတယ်။ ရုံးတွေ ကျောင်းတွေ ဆိုင်ဘာတွေမှာတော့ မလုပ်ကောင်းပါဘူး။ သူတပါးက ဒီနည်း သုံးထားရင်လဲ ကျော်လွှား သို့ ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့။
C:\_WINDOWS\_system32\_drivers\_etc ကိုသွားလိုက်ရင် "hosts" ဖိုင်ကိုတွေ့ပါမယ်။ Notepad နဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါ။
"127.0.0.1 localhost" ကိုအောက်နားမှာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီအောက်မှာ ကိုယ်ပိတ်ချင်တဲ့ ဆိုဒ် ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဥပမာ။ ။ google နဲ့ yahoo ကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်
127.0.0.3 www.yahoo.com ဆိုပြီး ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်။
ဒီထက်ပိုချင်ရင် 127.0.0.4 www.yrblocksite.com,127.0.0.5 www.yrblocksite.com စသဖြင့် ဆက်ထည့်ပေးပေါ့။ save ထားလိုက်ရင် IEအတွက်စိတ်ချရပြီ။
Labels: odds and ends, Proxy
/ 18:34 / Comments: (0)
Notepad အပေါ်ဆုံးမှာ .LOG ရိုက်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည်ပေး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာမှာ save လုပ်ထားပါ။ နောင်တစ်ချိန် ပြန်ဖွင့်ရင် ဖွင့်ချိန် ရက်စွဲတွေဟာ ရောက်ဆဲအချိန်ကာလကို ပြနေပါလိမ့်မယ်။
blogger တွေ မိမိ ပိုစ့်ကို notepad ရေးမှတ်တတ်ရင် ဘယ်အချိန် ဘယ်ရက်က ရေးခဲ့လည်း မှတ်ထားပေးပါတယ်။ Digital diary အဖြစ် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိမိ အသုံးတဲ့မယ့် နည်းကို ဥာဏ်ကွန့်သုံးပေါ့။ .LOG လေးလုံးထဲရယ်..
/ 19:18 / Comments: (2)
ဒီနေ့ MPT Proxy address ရိုက်ပြီးသုံးလို့ မရတော့ဘူးဆိုတော့ သော့ခာတ် ထားတာတွေချည်း တိုးနေတယ်။ ဒီလောက်ဖြစ်လှတာ Ultrasurf (US) ကို startup program ထဲ သွားထည့်ထားလိုက်တယ်။ အကုန်လုံး US နဲ့ဘဲ လစ်တော့တယ်..:)
US က ၀င်းဒိုး တက်တက်ချင်း ဖွင့်နိုင်တဲ့ ဆက်တင်မပါလို့ ကိုယ့်ဘာသာထည့်ပေးတာပါ။ ငှက်ပျောသီး နွှာသလောက် လွယ်ပါတယ်။
Computer\_Disk:C\_programs မှာ new folder တစ်ခုဖန်တီးပြီး Ultrasurf လို့ နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ Folder ထဲကို US ရွှေ့ထားလိုက်တယ်။
ပြီးရင် windows key+R\_regedit နဲ့ registry editor ကိုဝင်ပါတယ်။
ံHKEY LOCAL MACHINE\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run ထိရှာလိုက်ပါတယ်။
Runမှာ ကိုယ့် startup program တွေ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီ startup program တွေအောက်မှာ right click\_new\_string value ကိုရွေးလိုက်တယ်။
New value ကို Ultrasurf လို့ နာမည်ပေးပေါ့။ နာမည်ပေးပြီးတော့ right click\_modify သွားပြီး value data ကို C:\_Program Files\_Ultrasurf\_Ultrasurf.exe လို့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ဒါဆိုရပြီလေ။ restart ချလိုက်ရင် US ကို တကူးတက ဖွင့်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။
US option မှာ set IE proxy automatically ရွေးလိုက်တော့ online ကိစ္စ မှန်သမျှ US နဲ့ သာ လစ်ပါတော့တယ်။
myantel ကိုချိတ်ဘို့ directly use Ultrafurf ရွေးပေးရတာပေါ့။ Ultrasurf ပြောင်းရွှေ့နေရတာ ခုမှသက်သာသွားတော့တယ်။
လိုမှသုံးမယ် ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆို win key+R\_msconfig\_startup သွားပြီး Home ultra ကို အမှန်ခြစ်လေး ပြန်ဖြုတ်တာပေါ့။
Two way သုံးမယ်ဆို IE အတွက် IEpro ရှိပြီး Firefox အတွက် foxyproxy တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
လိုအပ်ချက် ကသာ အဓိကပါ။ နည်းလမ်းပေါင်းစုံက ....................
/ 00:59 / Comments: (0)
Firefox 3.0.1 upgrade လုပ်ပြီး bug တွေနည်းသွားတယ်၊security ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ စမ်းရင်း ရှာရင်း မဆီမဆိုင် McAfee SiteAdvisor သွားတွေ့တယ်။ Search engine တွေက ရှာပေးသမျှ ကောင်းသလား ဆိုးသလား ခွဲခြားပေးသလို မိမိဆိုဒ် သို့ သွားမယ့်ဆိုဒ်ကိုလည်း စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ Spyware တွေ Virus တွေရှိရင် သတိပေးတော့ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။
McAfee SiteAdvisor က browser addon အဖြစ် free ပေးသလို www.siteadvisor.com မှာ url ရိုက်ပြီးလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Browser addon အဖြစ်သုံးရင် search result မှာ warning နီစိမ်းဝါတွေနဲ့ ခွဲခြားပြပေးပါတယ်။
url ရိုက်ပြီး စစ်ရင်လည်း နီစိမ်းဝါနဲ့သာပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လင့်တွေ ဖိုင်တွေကဖြင့် လုံခြုံရေး အဆင့် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ meter နဲ့ ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Virus software ကောင်းရှိနေပါစေ ဒုစရိုက်နယ်မြေကို ကြိုသိကြိုရှောင်ရအောင် siteadviser နဲ့ McAfee addon လေးကို ရှေ့က ပေးသွားလိုက်ပါလား.........
/ 12:19 / Comments: (3)
/ 05:26 / Comments: (2)
သတင်းမုဆိုး တွေအတွက် application တစ်ခုပါ။ Browser တစ်ခုလိုပါ အသုံးချနိုင်ပြီး လိုချင်တဲ့ သတင်းကို ကလစ်ထောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Windows live mail ( outlook ) မှာ RSS မှာယူရာကနေ Snarfer တွေ့လို့ သူ့ကိုဘဲ ပြောင်းသုံးသွားတော့တယ်။
File size က 400kb သာရှိပြီး free ပေးပေမယ့် မယုံနိုင်စရာ support လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Data base ကြီးတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ loading time လျှော့ကျသွားလို့ RSS နဲ့ ဖတ်ရတာ နှစ်သက်သူတွေ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ှSnarfer မှာက နှစ်သက်တဲ့ စတိုင် ဆင်ယင်နိုင်သလို feeds plugin များစွာလည်း ပေါင်းထည့်နိုင်သေးတယ်။
RSS ဖတ်ရှုဖို့ google reader စတိုင်မြင်ကွင်းကျယ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာမို့ အခြား pluginတွေ reader တွေက ဖတ်ရတာထက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
သုံးစွဲစဉ် တွေ့လာတဲ့ ချွတ်ယွင်းလိုအပ်ချက်တွေ သိလိုတဲ့ အချက်တွေ အပြင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက် ကြေငြာသတိပေးတာတွေ တောင်းဆိုတာတွေကို လုပ်နိုင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Defult အနေနဲ့ ကဏ္ဍ ၁၅ ခုခွဲပြီး အောင်မြင်တဲ့ သတင်းဌာနတွေဆီက update ဖတ်နိုင်သလို နှစ်သက်ရာ site က RSS ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
RSS ရယူခွင့်ပြုထားတဲ့ site တွေက အပြည့်အစုံ ရှယ်မလုပ်ထားရင်လည်း browser လို redirect လုပ်ပေးပါတယ်။
comment တွေ rating တွေ ချက်ချင်းပေးဘို့ သီးသန့် browser မဖွင့်ရတော့ပါဘူး။ feeds update လုပ်ချိန်လည်းမြန်တယ်။
Portable အနေနဲ့ သုံးနိုင်အောင် ပြောင်းပြီး download link တင်ထားပါတယ်။ Cyber မှာ memory stick နဲ့ သုံးနေသူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်တာပါ။
Plugin တွေပါ ပေါင်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ Stick မှာ zip ဖြည်သုံးရုံပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံတွေ နဲ့ RSS အပြည့်မရတဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုတော့ သီးခြားcopy လုပ်ရပါမယ်။
Direct con. သို့ system နဲ့ သုံးမယ်ဆို homepage မှာ screenshot တွေနဲ့အတူ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လို့ရပါတယ်။
စာရှုသူတွေကို beginner လို install လုပ်ပုံ သုံးစွဲပုံတွေ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ ရိုးစင်းလွယ်ကူမယ် ထင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းရင်တော့ ကြော်ငြာသူ ညံ့လို့နေမှာ...:)
Download portable snarfer
/ 03:43 / Comments: (0)
ကမ္ဘာ့ရွာကြီးထဲ မြန်မာတွေ ဘာထွက်လုပ်နေလည်း google မှာရှာကြည့်တာ gmail ပို့နေကြတယ်။ sexy နဲ့ news က နောက်နားမှာရှိနေတယ်။အလုပ်ရှာ ပညာသင် ထက် သီချင်း ကိုပိုရှာနေသလိုဘဲ။ ဒါပေမယ့် gmail သုံးစွဲမှုမှာတော့ သြချလောက်ပေရဲ့။ ခက်ခဲတာမှ ပိုလိုချင်ကြပုံဘဲ။ ကျမ်းပြုလောက်အောင် အသေးစိတ်ရှာထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မှန်းပြီးရှာကြည့်ထားတာ ဘ၀င်မကျရင် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်စေချင်တယ်။
Google trends ရဲ့ address box မှာ သိချင်တဲ့ အမျိုးအစားများကို ကော်မာခံပြီး ရှာတာပါ။ ငါးမျိုးထိ ယှဉ်တွဲရှာနိုင်ပါတယ်။
website တွေလည်း trends for website မှာရှာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ ရှာလို့မရပါဘူး။
နိုင်ငံတစ်ခုစီ နဲ့ ကာလကိုသီးသန့် ရွေးရှာလို့ရပါသေးတယ်။ US မှာတော့ more hot ternds နဲ့ သွားပြီး top 100 ကအကြောင်းအရာတွေ မှီငြမ်းပြီး ပိုစ်တင်ရင် site traffic တက်တယ်ဆိုလားဘဲ။
ဒီမှာတော့ မြန်မာမှုပြူရမှာပေါ့။ တစ်ချိန်က ဟိုမော်ဒယ်နာမည်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး သလိုပေါ့။ ခု နာဂစ်ကဥပမာပါ။
Defult အနေနဲ့ all region နဲ့ရှာပေးပြီး ဂရပ်ဖ်နဲ့ ပြပေးပါတယ်။
ကိုယ်သိချင်တဲ့ နိုင်ငံရွေးပြီး တစ်လ တစ်နှစ်ချင်းစီ 2004 ကစပြီးလေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
မြန်မာအင်တာနက်သုံးစွဲတဲ့ ကာလအတွက်တော့ လုံလောက်စေပါတယ်။
ms excel ရှိရင် Export this page asaCSV file မှာ ဒေါင်းလုပ်ဒ် ရယူထားနိုင်ပါသေးတယ်။
လူတွေ ဘာကြိုက်လည်း သိတော့ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင် ခါးပိုက်ထောင်ထဲ ထည့်စေဖို့တော့ google က ရည်ရွယ်ဟန်မတူပါဘူး။
ဗဟုသုတ အကျိုး တိုးပွားစေလိုကြောင်းလို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။
/ 03:36 / Comments: (0)
Vista က ဂရပ်ဖစ်တွေ လှချင်တိုင်းလှနေပြီး command prompt ကမဲကြုတ်ကြုတ်နဲ့ အမြင်ကတ်လို့ ချိန်းပစ်လိုက်တယ်။ စွမ်းဆောင်ချက်တွေလည်း ထပ်တိုးလာအောင်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အလန်းလေး ဆင်တာလည်း ဖီလ်းတစ်ခုပေါ့။
Start\_run\_cmd နဲ့ GO မယ်။ပြီးရင် command prompt အပေါ်ဘယ်က icon ပေါ် right click\_properties ခေါ်လိုက်မယ်။
cmd propertues box မှာ font layout colour တွေစိတ်ကြိုက်ချိန်ပေါ့။
screen buffer size မှာ High 9999 ထိထားတယ်။ file ရာချီ အတွက်ပေါ့။
Power user ဆိုပြီး လူရှိန်အောင်လုပ်တာ :)
windows size ရဲ့ width ကို 100 ထားတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြင်ရအောင်လို့
ထူးခြားတာက option ပါ။ edit option မှာQuick edit mode ကို mark လုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါမှ copy\_paste ကို right click နဲ့ သုံးနိုင်မှာ။ cmd မှာ တစ်လုံးချင်း ကြည့်ရိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခကင်းပြီပေါ့။ဒါဆို command prompt အလန်းလေးဖြစ်ပြီ.......
/ 02:52 / Comments: (1)
ဟား..ဟား..နမော်နမဲ့ စာမဖတ်ဘဲ စမ်းမိတာ 14 မိနစ် ရပ်ထားလိုက်ရတယ်။ Gmail labs ရဲ့ အမြည်းလေး အငမ်းမရ စားတဲ့အကျိုးပေါ့။
Gmail labs ပေးထားတာ ခုမှသိတယ်။ Glite နဲ့ လစ်နေတာကိုး။ https://mail.google.com နဲ့ မမြည်းရသေးရင် သွားမြည်းကြည့်လိုက်ပါ။ အရသာလေးကတော့........တယ်ရှိ..
Gmail ထဲက setting\_labs ကိုသွားလိုက်ရင် new features 13 ခုတွေ့ရပါမယ်။ Disable လုပ်ထားတယ်။ သုံးချင်တဲ့ feature ကို enable လုပ်ရုံပါဘဲ။ Firefox extension တွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
Gmail ညာဘက် sidebar မှာလာပေါ်ပါတယ်။ သီးခြား မှတ်သားထားချင်တဲ့ message ကိုဖွင့်ပြီး Add quick link နှိပ်ပြီး မှတ်သားတာပါ။
Lable လည်းနှစ်သက်ရာ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Gmail bookmarks ပေါ့။
Gmail ရဲ့ setting\_general မှာ star icom 12 ခုဖြစ်နေတာတွေ့ရပါမယ်။ လိုအပ်သလောက် drag n drop ပေါင်းထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်သလောက် သုံးဆိုပြီး ပေးထားတယ်နဲ့ တူတယ်။ Gmail storage တက်လာတာနဲ့ လိုက်ဖက်ညီပေါ့။
mail မှာ keyboard shortcuts ထည့်ပေါင်းထားတယ်။ လေ့လာမယ်ဆို setting\_keyboard shortcuts မှာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
Mail ထဲက chat ရင် ပုံပေါ်လာတာပါ။
Screen ညာအပေါ်mail address နဲ့ setting ကြား takeabreak ပေါ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်မိတဲ့ ငရုပ်သီး 14 မိနစ် breaktime ယူလိုက်ရတယ်။
ထွေထွေရာရာလေးတွေ ပေါင်းထည့်လာတာ နှစ်လိုစရာပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲတွေလည်း မပါဘံ သုံးရပိုအဆင်ပြေအောင် ထပ်တိုးထားတဲ့ feature တွေပါ။
လိုအပ်ရင် send feedback ကနေ lab တစ်ခုချင်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တော့ စာရွက်နဲ့ စာပို့စနစ်ကို စိတ်ကုန်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် Gmail ရှိသူကိုဘဲ.....................................:-D
/ 03:40 / Comments: (0)
Blogspot တော့ ဒီဇိုင်းသစ်နဲ့ ဘန်းခံထိပြီဗျာ..MPT address နဲ့ သုံးပြီး no proxy ပြောင်းမှ ငြင်းလွှတ်တယ်။ ဒီတိုင်းဆို server
ချိန်းမရတော့ရင် ခက်ပြီ။ ခုတော့ rapidshare မှာ ip နှစ်မျိုးနဲ့ download ရနေတယ် :)
ဒီဇိုင်းသစ်ဆိုတာက Stop access denied မဟုတ်တာကလွဲရင် သုံးမရတာချင်းတူတာပါဘဲ။ Filter မတူတာဖြစ်ပေမပေါ့။
ဲမြန်-တယ် က stable ဖြစ်သွားရင်တော့ mpt server က..........
ဒီတိုင်းလေး နှစ်မျိုး ခွသုံးနေရရင်.....................ဘုရား ဘုရား ဘာတွေ ပြောင်းလည်းဦးမှာလည်း...
/ 22:32 / Comments: (0)
/ 03:02 / Comments: (0)
/ 01:17 / Comments: (0)
မကြာခဏ ပိတ်၊ဖွင့် လုပ်နေရတဲ့ folder နဲ့ program တွေကို keyboard shortcut လုပ်ထားကြမယ်။ ရှာဖွေနေရချိန် သက်သာအောင်ပေါ့။ Desktop ပေါ်မှာဆို မသိသာပေမယ့် drive D:/ (သို့) C:/ ထဲက ဒေတာတွေ သွားယူနေရတာဆို ကြာလို့...
မိမိ သုံးလိုသော folder ပေါ်right click ထောက်ပြီး send to/desktop ရွေးလိုက်ပါ။
desktop ပေါ်က shortcut icon မှာ right click\_properties\_shortcut ကိုသွားမယ်။
Shortcut key box မှာ Ctrl+Alt+M ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်။
ဒါဆို Startmenu => Mycomputer => D:/ => Data folder ဆိုပြီး မသွားရတော့ဘူးပေါ့။
Program ဆိုရင် icon ပေါ်right click\_properties\_shortcut သွားပြီး Shortcut key ဖန်တီးပေးရုံပါဘဲ။
Program များများဖွင့်သုံးရရင်လည်း အလုပ်မရှုတ်တော့ဘူး..:)
/ 17:08 / Comments: (0)
ကွန်ပြူတာထဲမှာ ကြက်ဥတွေရှာပြီး ကြော်စားကြရအောင်..Easter egg ဆိုတာကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေထဲမှာ ၀ှက်ထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ငယ်လေးတွေပါ။ဆော့ဖ်ဝဲလ် စားသုံးသူတွေအတွက် အပိုရွှေဆုပေါ့။ မသိလို့တော့ ဘာမှပြသနာမရှိသလို program ကိုလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။
ကြိုပြောပါရစေ..မလိုချင်လို့ uninstall လုပ်ချင်လည်း ကျွန်တော် မလုပ်တတ်ဘူးနော် :-)
ဒီကြက်ဥတွေဟာ program တွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်၊ပုံ၊လှုတ်ရှားမှု၊ပန်းချီတွေ ဒါမှမဟုတ် ထူးခြားတဲ့အသံဖိုင်၊ebook တွေ တစ်မျိုးမျိုးအဖြစ်
ပါဝင်လာပါတယ်။ အီစတာကြက်ဥတွေ ရှာဖွေကြော်စားလို့ရမယ့် နည်းတစ်ချို့ရှာထားတယ်..အောက်မှာ မြည်းကြည့်ပါဦး....
အီစတာပွဲတော်ကို Jesus Christ ပြန်လည်ရှင်သန် ထမြောက်လာမှုကို မျှော်လင့်တမ်းတတဲ့ အမှတ်တရပွဲတော်အဖြစ် ကျင်းပပါတယ်။ မတ်လ 21 ရက်နောက်ပိုင်း လပြည့်နေ့ နဲ့ကပ်လျှက် တနင်္ဂနွေနေ့ကို easter sanday လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။Good friday ကနေ easter monday အတွင်း ရက်သတ္တပတ်မှာ ဆေးရောင်ခြယ်ထားတဲ့ ကြက်ဥကို ကြိုတင်ဝှက်ထားပြီး ပြန်ရှာကြရတဲ့ ကစားနည်းရှိတယ်။
ဒါကိုအစွဲပြုပြီး ကွန်ပြူတာမှာ easter egg လို့ခေါ်လာတာ 1970 လောက်ကတည်းကလို့ဆိုတယ်။
Documation,help ခေါ်ebook,online help,auto update တွေနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဘဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ key conbination တွေ အားလုံးတိုက်ဆိုင်မှ ဘွားခနဲ ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ အသုံးများတဲ့ OS,google နဲ့ firefox က easter eggs တွေ စုထားပါတယ်။
Firefox3မှာ about:robots,about:mozilla တို့ကို url bar မှာ ရိုက်ကြည့်ပြီး firefox egg တွေ တွေ့ရပါမယ်။
Vista OS မှာဆို Start\_run\_msconfig ဖြင့်သွားပါ။ system configuration\_boot မှာ noGUIboot ကိုရွေးရင် vista boot screen ပြောင်းသွားပါမယ်။
ှStart menu ရဲ့ လွတ်နေတဲ့နေရာ ( near account`s picture ) မှာ Ctrl+Shift တွဲနှိပ်ပြီး right click နှိပ်ရင် exit explorer ဆိုတဲ့ egg လေးပေါ်လာပါတယ်။
Start\_run\_Media ကိုရိုက်ရင် windows ရဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ရရှိလာပါမယ်။
https://mail.google.com/mail/help/paper/ ဒီလင့်ဟာ google ရဲ့ သီးသန့် paper mail ပါ။
www.google.com မှာ “ answer to life, the universe, and everything ” ရိုက်ရှာရင် calculater ကိုရပါမယ်။
www.google.com/googlegulp/ ဒါက google ဖျော်ရည်ပါ။
http://www.google.com/reader မှာ login ၀င်ပါ။ mouse မသုံးဘဲ arrow key ကို အောက်က အစီအစဉ်အတိုင်းနှိပ်ကြည့်ပါ။
မိမိတို့ သုံးနေတဲ့ software တွေမှာလည်း easter egg တွေ ရှိပါတယ်။ အမှတ်မထင်တွေ့ရင် ကြော်စားပစ်လိုက်ပါ။ အသင့်ရှာထားပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေလည်းရှိပါတယ်။
www.gamespot.com/ ဒီလင့်တွေမှာလည်း စုဆောင်းထားပါတယ်။
ပိုလိုခဲ့တယ်ဆို search engine တွေကို အပူကပ်လိုက်ပါ။
/ 11:00 / Comments: (0)
Firefox3ထွက်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း download လုပ်သူ 27 သန်းကျော်ရှိခဲ့လို့ ဂင်းနစ် စံချိန်တင်သွားခဲ့ပါပြီ။ လိုအပ်ချက်တွေ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး version 3.1 ကို ယ္ခု ဇူလိုင်လမှာ ထပ်ထွက်လာပါမယ်။ မြန်မာမှာတော့ 4000 ခန့်သာ download လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဒီဆိုဒ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Firefox3ရဲ့ trick တစ်ချို့စုဆောင်းထားပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မရှိသေးလို့ download ဆွဲမယ်ဆို right sidebar မှာအဆင်သင့်ပါဘဲ။
Firefox3မှာ Yahoomail အမြန်ပို့ချင်ရင် tools\_options\_applications သို့သွားပါ။ search bar မှာ mailto ကိုရှာပြီး use yahoo! mail ကိုရွေးပေးပါ။
ဒါဆို file\_send link ကို click လုပ်ရင် (သို့) mailto:link ဆိုပြီး url bar မှာ ရိုက်ရင် yahoomail အမြန်ပို့လို့ရပါပြီ။
remenber password လုပ်မထားရင်တော့ login အရင်ဝင်ရပါမယ်။
Gmail သုံးချင်ရင်တော့ url bar မှာ about:config ရိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် filter bar မှာ “ gecko.handlerservice ” ရိုက်ပါ။
“gecko.handlerServiceAllowRegisterFromDifferentHost” ကို double click ဖြင့် true သို့ ပြောင်းပေးပါ။
"https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s","GMail") ” ဒီကုဒ်တွေကို url bar မှာ ရိုက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို application ရဲ့ mailto:links မှာ gmail ကို လာပေါင်းထည့်ပါပြီ။ add application ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Yahoomail နေရာမှာ gmail ကို application ထဲဝင်ပြောင်းလိုက်ရင် Gmail အမြန်ပို့နိုင်ပါပြီ။
Maximum number of Awesome Bar results
င်္Firefox3ရဲ့ အသွင်သစ်တစ်ခုက bookmarks က url တွေ address bar မှာ ပါလာတာပါ။
လိပ်စာရိုက်ဘို့လုပ်တိုင်း url တွေ တစ်ပြုံတစ်မကြီး ကျလာတာ မျက်စိနောက်ရင် လျှော့လို့ရပါတယ်။
“ about:config ” လို့ address bar မှာရိုက်ပါ။ တဖန် filter bar မှာ browser.urlbar ကို ရိုက်ပါမည်။
“ browser.urlbar.maxRichResults entry ” ကို double click နှိပ်ရ်ျ ပေါ်လာသော popup window မှာ integer value ကို5သို့ပြောင်းလိုက်ပါ။
ယ္ခု awesome bar မှာ default 12 ခုကနေ5ခုပြောင်းသွားပါမယ်။ လုံးဝ မမြင်ချင်ရင်တော့0သာပြောင်းလိုက်ဗျာ :-)
Awesome bar က5ခုနဲ့နည်းသွားပြီဆိုတော့ ကိုယ် အသုံးများတဲ့ bookmarks က url တွေဘဲပေါ်ဘို့လိုပါတယ်။
ဒါမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးနိုင်မှာပေါ့။ “ browser.urlbar.matchOnlyTyped ” ကို double click နဲ့ true ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
နောင် အမြဲသုံးတဲ့ bookmarks5ခုဘဲပြနေပါလိမ့်မယ်။
Old addons to work in Firefox 3
Firefox3မှာ addons တစ်ချို့ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ နောင်မှာတော့ update လုပ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီ addons တွေအတွက် ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။
ရှေ့ကအတိုင်း “ about:config ” ကို address bar မှာရိုက်ပါ။ Filter bar မှ extensions.check ကို ရိုက်ပါ။
“ extensions.checkCompatibility ” နဲ့ “ extensions.checkUpdateSecurity ” ကို double click ဖြင့် false သို့ ပြောင်းပေးပါ။
ဒါဆို okey ပြီ။
Firefox's new Zoom feature
Firefox3ရဲ့ zoom feature အသစ်ဟာ webpages ကို ချုံ့ သို့ ချဲ့ ကြည့်ပြီး ဒီအတိုင်းပိတ်လိုက်မယ်။ ပြီးမှ အဲဒီ webpages ကို ပြန်ဖွင့်ရင်
နဂို zoom ချုံ့ သို့ ချဲ့ ထားတဲ့ အနေအထားအတိုင်း ပြန်ပေါ်စေပါတယ်။ လိုအပ်မှ ချုံ့ သို့ ချဲ့ မယ် ၊ zoom 100 မှာဘဲပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ချင်ရင် ရပါတယ်။
address bar မှာ “ about:config ” ရိုက်မယ်။ “ browser.zoom.siteSpecific ” ကို filter bar မှာ ရှာမယ်။
တွေ့ရင် double click နဲ့ false ကိုပြောင်းထားပေါ့။ ဒါဆို ပြန်ဖွင့်တိုင်း 100 zoom နဲ့ဘဲပြပါတော့မယ်။
Firefox3ပြောင်းသုံးပြီး အခက်အခဲမရှိ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။